Abiya Axmed oo Dhambaal usoo Diray Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya - HOBYOMEDIA
Home Uncategorized WARARKA MAANTA Abiya Axmed oo Dhambaal usoo Diray Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya
Abiya Axmed oo Dhambaal usoo Diray Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya
Ra’isul Wasaaraha xukuumadda Itoobiya Abiy Axmed ayaa dhambaal hambalyo ah usoo diray Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay lagu doortay magaalada Muqdisho.
Abiy Axmed ayaa sheegay in si dhaw ula shaqeyn doono Madaxweynaha cusub ee yeelatay dowladda Soomaaliya, waxa uuna cadeeyay in ay iska kaashan doonaan arrimo badan sida xiriirka iyo danaha labada dal.
”Waxaan jeclaan lahaa inaan u hambalyeeyo Madaxweynihii hore Hassan S Mohamud oo dib loogu doortay inuu noqdo Madaxweynaha Soomaaliya. Waxaan rajeynayaa inaan si dhow idiinkala shaqeeyo danaha labada dhinac iyo kuwa gobolka” ayuu yiri Abiy.
Ra’isul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa horey xiriir dhaw u lala lahaa Madaxweynaha xilka ka degay ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana Itoobiya iyo Eritrea kamid ahaayeen dowladaha Farmaajo xiriirka wanaagsan la lahaa.
Previous articleMuxuu qoor qoor Ka yiri Guusha xasan sheekh Maxamuud
Next articleDowladda Britain oo Ballanqaaday saddex arrimood oo ay kala shaqeen doonto Maadxweyne Xasan Sheekh